चिकित्साशास्त्र शिक्षाका लागि सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य : डा. केसी - Everest Dainik - News from Nepal
चिकित्साशास्त्र शिक्षाका लागि सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य : डा. केसी
काठमाडौं, कात्तिक २७ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले तत्काल सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ०७४ जारी गरेसँगै सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएसँगै तीन करोड नेपालीलाई फाइदा पुगेकाले अब तत्काल सत्याग्रहको आवश्यकता नभएको बताए । ‘मैले सत्याग्रह सधैँका लागि अन्त्य भयो भनेको होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो र महत्वपूर्ण माग भनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले ऐनको रूप लिनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले भनेअनुसार आएको छ । त्यसैले तत्काल सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा सत्याग्रह थाल्ने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको पक्षमा उभिन उम्मेदवारलाई आग्रह
डा. केसीले निर्वाचनका लागि मत माग्ने समय भएकाले जनतामाझ जाँदा चिकित्सा शिक्षा ऐनको पक्षमा उभिने वा नउभिने स्पष्ट हुन दलका उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आगामी निर्वाचित सांसदले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संसद्बाट पास गराउने पनि विश्वास लिएका छन् । ‘मेरा माग धेरै पूरा भएका छैनन्, तर मुख्य माग पूरा भएकाले यसमा चित्त बुझाएको छु । बाँकी माग क्रमिक रूपमा पूरा हुँदै जानेछन्,’ केसीले भने । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गराउन सुरुदेखि सहयोग गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, युवा नेता गगन थापालगायतलाई धन्यवाद दिए ।
याे पनि पढ्नुस वर्तमान सरकार सामन्ती र शोषक : पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की
केसीका बाँकी माग
डा. केसीले आफ्ना धेरै माग अझै यथावत् रहेको बताए । आइओएमलाई दिएको अधिकार त्रिविले लगेपछि केसीले पुनः आइओएम स्वायत्तताको कुरा उठाउँदै आएका छन् । उनले विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भ्याकेटमा जानुपर्ने बताए । ‘चार साताअघि आइओएमको प्रवेश परीक्षामा भएको चिट चोरी प्रकरण तत्काल सार्वजनिक गरी कारबाही थालिनुपर्छ,’ केसीले भने । त्रिविका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै उनले कारबाहीको माग गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस डा‍. केसीकाे समर्थनमा देशभरका अस्पताल ठप्प
डिनको पुत्ला जलाइयो
एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको रिजल्ट नगरेको भन्दै आइओएमका विद्यार्थीले डिनको पुत्ला जलाएका छन् । २८ असोजमा भएको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको चिट चोरीको विषयलाई लिएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग राखी विद्यार्थीले डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुत्ला जलाएका हुन् ।
चीन र फिलिपिन्समा पढेका चिकित्सक विशेषज्ञ परीक्षामा असफल
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रका लागि लिएको परीक्षामा ७१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । अनुत्तीर्ण भएका करिब ३० प्रतिशत चिकित्सक भने चीन र फिलिपिन्सबाट पढेका छन् ।
आइतबार राति अबेर सार्वजनिक नतिजामा ७१.४० प्रतिशत चिकित्सक पास भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले जानकारी दिए । एमडी, एमएस र एमडिएसमा तीन वर्षे विशेषज्ञता हासिल गरेपछि बिरामी जाँच गर्न मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । प्रमाणपत्र लिन सात सय ३८ चिकित्सक परीक्षामा सहभागी थिए । सहभागी चिकित्सकमध्ये दुई सय ११ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । चीन र फिलिपिन्समा पढेर आएका चिकित्सकले परीक्षामा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको काउन्सिलले जनाएको छ । डा. शर्माका अनुसार ६ जना चिकित्सक परीक्षामा सहभागी भएनन् । सहभागी चिकित्सकले ४६ विषयमा परीक्षा
याे पनि पढ्नुस सरकारलाई नेपाल चिकित्सक संघको २४ घण्टे अल्टिमेटम
‘खडेबाबा’ रोक्ने उद्देश्य
रजिस्ट्रार डा. शर्माले नेपालमा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विदेशबाट आउने ‘खडेबाबा’ रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘विदेशमा रिटाय भएका चिकित्सकले नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विस्तापित गर्न आवश्यक छ ।’ खासगरी भारतको बिहारबाट यस्ता चिकित्सक आउने गरेका छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुन नदिन वर्षमा तीनपटक परीक्षा लिने गरेको शर्माले जानकारी दिए । दर्ता परीक्षा पास गरेपछि मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा काम गर्न पाइन्छ । करिब १९ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता छन् । यसमध्ये करिब ६ हजार विशेषज्ञ छन् । हरेक वर्ष १५ सयको संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुने गरेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट